လူလိမ်မ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » လူလိမ်မ
Posted by nigimi77 on May 10, 2012 in Short Story | 42 comments
လူလိမ် ဆိုရာဝယ် သိက္ခာ ရှိစွာ လိမ်ခြင်း နှင့် သိက္ခာ မဲ့စွာ လိမ်ခြင်း ဟု အမျိုးအစားခွဲခြားကြည့်ကြပါစို့။
ဒင်းသည် လွန်စွာ ချိုသာ၏ ။ သို ့သော်….ဒင်းသည် လွန်စွာ လိမ်ညာတတ်ပေ၏ ။
ဒင်းကြောင့်ပင် ဖြေရှင်းချက်များစွာ ထုတ်ရ၏ ။ ဒင်းကြောင့်ပင် လူတို ့၏ မယုံသင်္ကာမှု အပြုခံရ၏ ။
ဒင်း ရေရွတ်နေကြ စကားတွေရှိ၏ ။ ရေရွတ်သော စကားတိုင်းက လက်ရှိ လက်တွေ ့အခြေအနေနှင့် ကွဲလွဲပေ၏ ။
ရံဖန်ရံခါတွင်မတော့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ လိမ်ညာပြန်လေ၏ ။
“…လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုနေသော တယ်လီဖုန်းမှာ စက်ပိတ်ထားပါတယ်ရှင်…”
နိဂိမိ ဘယ်သော အခါမှ စက်မပိတ်ပါ ။ ပေါ်တင်ကြီး လိမ်ညာနေသည် ။
အလွန် သိက္ခာကင်းမဲ့စွာ…..အရှက်မရှိစွာ…..ကြိုက်သလို ထင်ကွာ….ဘောပဲ…..
ဆိုသည့် အချိုးမျိုးနှင့် ပက်ပက်စက်စက် လိမ်ညာနေ၏ ။
ပြီးခဲ့သည့် ၂ လပိုင်းမှ စတင်ပြီး ရွာထိပ်တွင် တန်ဖိုးနည်း GSM တာဝါတိုင် စခန်း ဆောက်လုပ်ရေး
စတင်ခဲ့သည် ။ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် GSM SIM CARD ဈေးရောင်းပွဲကြီးကလည်း နီးလာပြီ ။
ဒီတော့ ဈေးရောင်းပွဲကြီး အမှီ ယာယီ တာဝါတိုင် အသေးကို တပ်ဆင်ကြသည် ။
အဆောက်အဦး ဆိုတာကလဲ အင်္ဂတေ အသားကျက်အောင် စောင့်ရသေးသည် ။
ခက်သည်က သည်ရွာမှာ လျှပ်စစ်မီးက မရှိ ။ ပြောင်ပြောင်လက်လက် အပြားတွေ တပ်ဆင်တာ မြင်တော့
မောင်မင်းသားကြီးတွေ Solar ပြားနှင့် လျှပ်စစ်ထုတ်မည် ဆိုတာကို သိရသည် ။ ဂေဇာတ်မှာ အော်နေကြတဲ့
၅ ထောင်ဖုန်း ရဲ့တာဝါတွေကတော့ ဘယ်လိုနေမလဲမသိ ။ ဆက်သွယ်ရေး ရဲ့GSM ကွန်ယက် တာဝါတိုင်
ကတော့ တော်တော် အချိန်ယူရသည် ။ အားလုံးပြီးစီးဖို ့ကို အချိန်ပေးရသည်ကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ ့။
ကျောက်ဖြူမြို ့ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးရုံးကနေ Fiber Optic Cable တွေကို သွယ်တန်းလာလိုက်တာ
ကျောက်ဖြူမြ်ို ့နဲ့၆ မိုင်လောက်ဝေးသော ယခု နိဂိမိ နေထိုင်သော ဂုန်းချွိန် ကျေးရွာ အထိပင် ။
တာဝါတိုင် တခုတခု ထောင်ဖို ့အတွက်ကို အတော့်ကို ကုန်ကျစားရိတ်များမည် ထင်၏ ။
Fiber Optic Cable တခုနှင့် တခုကြား ဆက်ထားသော Joint Box တခုလျင်ပင် ကျပ် ၁ဝ သိန်း ကျော်သည်ဟု ဆိုသည် ။
အဆောက်အဦးမှာ တဖြည်းဖြည်း ရုပ်လုံးပေါ်လာလေသည်။ မကြာမီ ဈေးရောင်းပွဲကြီးလည်း စတင်တော့မည် ။
ဘယ်တုန်းကမှ GSM သုံးလို ့မရခဲ့သော ကမ်းရိုးတန်း ဒေသမှာ နိဂိမိ G သုံးခွင့်ရတော့မည် ။ ကျေးဇူးကြီးမားပေစွ ။
၃ လပိုင်း၏ တခုသော နေ ့လည်ခင်းတွင် နိဂိမိ၏ G သို့မည့်ကဲ့သို့ဘာသာပြန်ရမည်ကို မသိနိုင်သော တရုပ်စာများသည်
ဆက်သွယ်ရေး၏ ကွန်ယက်မှ တဆင့် ပေးပို ့လာခဲ့သည် ။ ဘယ့်နှယ်……ငါ နေတာ မြန်မာပြည်မှာပါ….တရုပ်စာနှင့် ပို ့တယ်
ဆိုတော့….အော်…..တရုပ်က စက်တွေ ဆိုတော့လည်း …..တရုပ်စာတွေပေါ်မှာပဲ…ဟု…ကြံဖန် နားလည်ပေးလိုက်သည် ။
သည်လိုနှင့် ကျောက်ဖြူမြို ့ထဲတွင် G အရောင်းပွဲကြီး စတင်ခဲ့ပြီ…..။
ဝယ်လိုက်ကြသည့် လူတွေ အုန်းအုန်းကြွတ်ကြွတ်…….။
ထိုအထဲတွင် နိဂိမိလည်းပါသည် ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ လိုင်း……။ တိုင်က အပြည့်ကို ပေါ်နေသည် ။ ဖုန်းခေါ်ဆိုတော့လည်း ဖြူးးးးးနေသည် ။
ဟန်ကျပြီ…..။ သူတို ့တွေ ပြောထားတဲ့ မာလ်တီမီဒီယာ မက်ဆေ့ချ် ကတော့ မရသေး ။ ဘယ်တော့ ရမလဲ
ဆိုတာလည်း မသိသေး…..။ ထားတော့……..သုံးလို ့ရတာနှင့်ပင် ဆီပုလင်းလေး ခါးချိတ်ထားချင်စိတ် ပေါက်နေသည် ။
ညနေ အလုပ်ပြီးတော့ ရေချိုး ရှိုးထုတ်ပြီး ထုံးစံ အတိုင်း ဘုံဆိုင်ကို ဒိုးမည် ။ အပြင်ထွက်လာတော့ ဆုံနေကြ ယမကာလုလင်
များဆီသို့ညနေ ၆ နာရီ တိတိ အချိန်တွင် ဖုန်းခေါ်ဆိုလိုက်သော အခါ…….” No Network “….ဆိုသည့် စာတမ်းက မိန် ့မိန် ့ကြီး
ပေါ်နေသည် ။ ဘယ်လို ဖြစ်ပါလိမ့်…………တာဝါစခန်းက စက်ပဲ ပျက်သလား……ဆိုလာပြား ကပဲ ပျက်သလား….ဘထ္ကရီ ပဲ
ကုန်သွားလေသလား…. ကဲ…ကဲ…..G မရတော့လဲ ဘာဖြစ်သေးသဒုံး…..ကမ်းရိုးတမ်း ကိုပဲ ပြန်ပြီး ထုတ်သုံးရတော့သည် ။
တရက် ၊ နှစ်ရက် ၊ သုံးရက် ၊ လေးရက် ၊ ငါးရက်…………………………။
သည်လို နှင့် လွန်ခဲ့သည့် ၄ လပိုင်း တလလုံး နီးပါး နှင့် ယနေ ့အချိန်အထိကို တပါတ်လျင် တရက်လောက်တော့ စက်ကိုဖွင့်ထားသည် ။
ဒါတောင် တနေကုန်မဟုတ် ။ တာဝါစခန်းသို့သွားကြည့်ရာတွင်လည်း ဆိုင်ရာ တာဝန်ကြ ဝန်ထမ်းလည်း မရှိ ။ ညဖက်လျင် သာ၍ ဆိုးတော့သည် ။
ဈေးရောင်းပွဲ မတိုင်မီ နှင့် ဈေးရောင်းပွဲ အပြီး အချိန် အတိုင်းအတာ တခု အထိတော့ စက်ကို ညနေ ၆ နာရီ အထိ ဖွင့်ပေးထားသည် ။
သည်ရွာမှာ ရွှေ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ပရောဂျက် ရှိသည် ။ ဝန်ထမ်း ထောင်ကျော်ရှိသည် ။ ဒေသခံ ရွာသား အချို ့မှလွဲပြီး ကျန်သော အနယ်နယ် အရပ်ရပ်
မှ ရောက်လာကြသော ဝန်ထမ်းများသည် အဆိုပါ တန်ဖိုးနည်း ၂သိန်းတန် G ကဒ်အား အားရပါးရ ဝယ်ယူကြလေသည် ။
ကျောက်ဖြူမှ ဒေသခံများမှ လည်း မြို ့လုံးကျွတ် အားပေးကြသည် ။ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမား မှ အစ ဈေးသည် အဆုံး အားလုံး G ဖုန်း ကိုယ်စီ နှင့် ။
ကျောက်ဖြူတွင် ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်သည် ၂၄ နာရီ စက်ဖွင့်ထားသည် ။ ဘယ့်နှယ် ဂုန်ချွိန်မှာ ရှိတဲ့ တာဝါတိုင်ကိုတော့ G ကဒ် ဝယ်ယူသူများ
လူစုံလောက်သော အခါတွင်မှ စပြီး စက်ပိတ်ထားလိုက်တော့သည် ။ ထို ့ကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးရုံးကို ဆက်သွယ်တော့ သူတို ့၏ ရုံးဖုန်းများသည်
ဘယ်သော အခါမှ ခေါ်ဆို၍ မရ ။ ရသော အခါတွင်လည်း ကိုင်သူမရှိ ။ သည်တော့ ဟိုမေးဒီမေးနှင့် သိသူ အချို ့က ဆက်သွယ်ရေး ကို မမေးနှင့် ။
IGE ကို မေးဟု ဆိုသောကြောင့် မေးသော ပြောသော အခါတွင် IGE မှ ဝန်ထမ်းသည် အလွန်ပင် ယဉ်ကျေးပျုငှာစွာ ….ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျ ….
ကျွန်တော်တို့စက်ကို အမြန်ဆုံး ပြန်ဖွင့်ပေးနိုင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်…ဟု ဆိုလာသည်…………။
စောင့်သည်…….စောင့်ပြီးရင်း ထပ်စောင့်သည်………မောင်မင်းသားကြီး တို ့လည်း ပေါ်မလာ…..။
မောင်မင်းသားကြီးတို့တာဝါတိုင်ကလည်း စက်မဖွင့်…….မောင်မင်းသားကြီးတို့ရောင်းသည့် ကဒ်ကလည်း တိုင်က တတိုင်မှ မမြင်ရ ။
ဆင်ပြောင်ကြီး အမြီးကျမှ တစ်တော့သည်……။ သည် အချိန်ထိ တည်ဆောက်လာခဲ့သော Infrastructure သည် အားလုံးပြီးစီးသည့် အခါ
သော့ခတ်၍ စက်ပိတ်ထားခြင်း အမှုအား မြိန်ရည်ရှက်လေ ပြုတော့လေ၏ ။
……….ဒင်းသည် ယုတ်ညံ့စွာ လိမ်ညာ၏….။
နိဂိမိ စက်မပိတ်ပါ ။
ဒင်းပြောသည်က “…လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုနေသော တယ်လီဖုန်းမှာ စက်ပိတ်ထားပါတယ်ရှင်…” တဲ့….
ဟဲ့….ဂုဆ္တာမ……..ငါ့ စက်က အား အပြည့်နဲ့၂၄ နာရီ ဖွင့်ထားတယ်ဟဲ့……..ပိတ်ထားတာက နင်တို့စက်ဟဲ့……။
“…ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ ရမ်းဗြဲကျွန်း ၊ ကျောက်ဖြူမြို ့နယ် ၊ ဂုန်းချွိန် ကျေးရွာ ထိပ် တာဝါတိုင် မှ ဘယ်သော အခါမှ စက်မဖွင့်ပေးသော
GSM ကွန်ယက်ကို ဝယ်ယူ ကိုင်ဆောင်ထားကြသော ဘဝတူတွေ အားလုံး အတွက် ရည်ရွယ်သည် ။……”
အူးလေးက လူလိမ်မလို့ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတော့
လူလိမ်မကို အမြန်ဆုံး ဖွင့်ပေးနိုင်ကြပါစေဗျား
ဗိုက်ကလေးရယ်…… စက်ပိတ်ထားပါတယ် “…ရှင်…” လို့ပြောနေမှတော့
လူလိမ်မလို့နာမည်တတ်ရတော့မပေါ့ ။
ဒီနားနဲ့ ဒီနားလဲ… ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပရောက်နေပါသဖြင့်ခေါ်ဆိုမရနိုင်ပါ…
တင်စားတာလေး ကြိုက်လို့ …. လက်မ တစ်ချောင်းပါဗျို့…။
ဟုတ်လား………ဒါဆိုရင်တော့ ဒုက္ခပါပဲ။ ဆက်သွယ်ရေးကို ပြန်တရားဆွဲရင်ရော ???
လိမ်တယ် ညာတယ် ဆ.သ.ရ ရေ ယုံအောင်ဖြီးတတ်တယ်
ဒီမောင်တွေမှာ ဖုန်းကိုင်ထားပြီး ခေါ်ဆိုမရတော့တယ်….. ဟေ့ တူနယ် တူနယ် ဗြောင်လိမ်…
အဲ နာတို့ရွာတော့ လူလိမ်မ ရောက်လာတေးဝူးတော့ …
ဟုတ်ပါတယ်။ တခါတလေကျွန်မအိမ်ဖုန်းကိုဖုန်းမြည်လာပြီး ဆက်သူမှ နင့် ဖုန်းဘာလို့ပိတ်ထားတာလဲ လို့မေးတတ်ပါသည်။ ထိုအခါကျွန်မမှလဲ ကျွန်မဖုန်းကို လက်တဘက်ဖြင့်ကိုင်ပြီး ကြိုးဖုန်းမှ ခေါ်ဆိုရာတွင် လူကြီးမင်းဖုန်း ဧရိယာပြင်ပရောက်နေပါတယ် တဲ့။ ကြည့်တော့လဲ တိုင်အပြည့်ပါ။ အစောကသူများခေါ် တုန်းက စက်ပိတ်ထားတယ်တဲ့။ ကျွန်မထပ်ခေါ်တော့ ဧရိယာပြင်ပတဲ့။ ကဲသူကလူလိမ်မဆိုတာရှင်းပါတယ်။ လက်မတချောင်းထောင်ပြီး ထောက်ခံပါ၏။
တစ်ကယ်လို ့လူကြီးမင်း အနေနဲ ့၊ အဲဒီ့ လူလိမ်မ နဲ ့အပြင်မှာ တွေ ့ဖြစ်ခဲ့ရင် မည်သို ့မည်ပုံ အစီအစဉ် ရှိသလဲ ဆိုတာ သိပါရစေချင့် ။
ကိုနိဂိမိ ရေ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့က စာဖတ်ရုံသက်သက် မမန်းဖြစ်သလောက်ပါပဲ
ဒီတစ်ခါတော့ မမန်းရ မနေနိုင်တော့လို့ ဗျ
မျက်ကန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခင်ဗျားရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ စိတ်ဓါတ်လေးကို လေးစား ဂုဏ်ယူကြောင်းလေး ပြောချင်လို့ပါ ( ဟို ပို့စ် တုန်းက နောက်မှ သိရလို့ မမန်းဖြစ်တာနဲ့ အခုမှ ဝင်မန့်ရတာပါ)
ဖုန်းတွေကတော့ ပြော မပြောချင်တော့ပါဘူး တသက်လုံးကခေါ်ပြီး ဆေ့ဖ် လုပ်ထားတဲ့ နံပတ်နဲ့ ဖုံးခေါ်တာတောင် လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော ဖုံးမှာ မှားယွင်းနေပါသဖြင့် ပြင်ဆင်ခေါ်ယူပါရန် ဆိုတော့…
အဲဒါထက် ပိုဆိုးတာက ဖုန်းစကိုင်ကတဲက ဆေ့ဖ် လုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ကို ကွန်တက်ထဲကနေ ခေါ်ထားကို ဝမ်းချိန်းတွေ ဖြစ်တာပါဘဲ ။ ဥပမာ မောင်နီ ၁၂၃၄၅ လို ့ကွန်တက်ထဲမှာ မှတ်ပီးသား ကို ကွန်တက်ကနေ ကောလ် လိုက်တာ ၁၂၃၄၄ တို ့၁၂၃၄၆ တို ့ဆီ ရောက်သွားသတဲ့ဗျာ ။ အံ့ရောကိုဘဲ
ဟယ်အဲဒါအမှန်ပဲတော့။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲသိတဲ့သူများရှိရင် ရှင်းပြပေးပါအုံး။ သများလဲ သိချင်နေတာ။ ကိုယ့်ဖုန်းထဲအခေါ်ဝင်လာရင်လဲ ဒီဖုန်းကခေါ်ထားတာပါဆိုစွတ်ငြင်းခံ ရတော့တာပဲ။
“…လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုနေသော တယ်လီဖုန်းမှာ စက်ပိတ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ…”
“…လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုနေသော တယ်လီဖုန်းမှာ မအားလပ်သေးပါသဖြင့် ပြန်လည်ခေါ်ဆိုကြည့်ပါခင်ဗျာ…”
“…လူကြီးမင်း ခေါ်ဆိုနေသော တယ်လီဖုန်းမှာ ဆက်သွယ်မှုအတွင်းတွင် ရောက်ရှိနေပါသဖြင့် ခေါ်ဆိုလို့ မရနိုင်ပါခင်ဗျာ…”
ဒါကတော့ လူလိမ်ထီး ကြီးပေါ့နော် ….D
ကိုကဏန်းကြီး ဆဲဗမ်းဆဲဗမ်းရယ် … ရှင့်နယ့် … ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်ခံရတာကို… ဘယ်သူ့ကို ပတ်ရမ်းနေသတုံး … ။ တော်တို့ကို … ကမ်းရိုးတမ်းဖုန်းတုန်းကတောင် ဆယ့်ငါးသိန်းသွင်းခိုင်းကာ… ခပ်ပြင်းပြင်းရိုက်သွားခဲ့ပြီး ငါးသိန်းဖုန်းထပ်ထုတ်သေးတာပဲလေ … အခုလို ၂သိန်းဖုန်းထွက်လာတော့ … လိုင်းက ပွင့်မပွင့် စနည်းမနာသေးပဲ .. အလကားရသလို ပြေးဝယ်ကြတာ …. ကိုယ့်ဒေါသနဲ့ကိုယ့်မို့ … ဒေါပွမနေပါနဲ့တော့ဗျို့ … ။ နောက်ဆို တယ်လီဖုန်းတွေ .. အလကားချပေးတော့မယ် .. .. ခေါ်ဆိုခပဲ ကောက်တော့မယ်လို့ အသံထွက်လာလျှင်တောင် … .. ချင့်ယုံဗျို့ …
လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော တယ်လီဖုန်းမှာ စောင်ကြားထဲ သို့မဟုတ် ချောင်ကြားထဲသို့ ရောက်ရှိနေပါသဖြင့် ခေါ်ဆို၍မရနိုင်ပါရှင် ဟဲဟဲ လူဆိုးကြီးတွေ ကိုယ့်ငွေနဲ့ ကိုယ်အကုသိုလ်ဝယ်ယူကြတာကိုးဗျ မန္တလေးမြို့မှာလဲ ၂ သိန်းဖုန်း မန္တလေးဖုန်းဆိုပြီး ကြိုရောင်းလိုက်တာ အခုချိန်ထိ ပွင့်တဲ့ဖုန်းကပွင့် မပွင့်တဲ့ဖုန်းကမပွင့် စိတ်ညစ်စရာကောင်းလောက်အောင် ကုမ္ပဏီနဲ့မဆရ ပေါင်း ပြီးပြည်သူကိုစော်ကားနေကြတာလား ဒါမှမဟုတ် နည်းပညာကိုနိုင်နင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင်မရှိတာလားမသိပါဘူး စုတ်ပြတ်သပ်နေတာပါပဲ အေးရှားဝေါလ်ဆိုတာလဲ ခေတ်အဆက်ဆက် ပြည်သူအပေါ်ကောင်းခဲ့တဲ့ သူတွေမှ မဟုတ်တာ ဘိန်မှောင်ခိုလုပ်ပြီးချမ်းသာ ပြီးတော့ တပြည်လုံးဒုက္ခရောက်မယ့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းလုပ် အခုလည်း မန္တလေးက ပြည်သူတွေကို စော်ကားချင်တိုင်းစော်ကားနေတာ လော်စစ်ဟန်ရဲ့ကုမ္ပဏီပါပဲဗျာ
ဒါဂျီးကတော့ ဖြစ်သင့်ဘူးဗျာ ..
ဆက်သွယ်ရေးရုံးကို ခဲနဲ့ ဝိုင်းထုကြဗျာ ..
ချမယ် မဆရရော ကုမ္ပဏီရော နှစ်ခုလုံး
မြန်မာနိုင်ငံက ဖုန်းလိုင်းများကတော့ အားလုံးကိုရှုပ်နေတာပါပဲ။
KTV တို့ ဘာတို့ အလုံခန်းသွားသူတွေ အတွက်တော့ လူလိမ်မ ကကူညီသလားလို့ .. သိသူများကိုမေးကြည့်ကြပါဦး ..
အလုပ်ထဲရှိနေတာဘဲ .. လူလိမ်မ အဲ့ဒီလိုဖြေလေ့ ရှိတယ် ဆိုပြီး အလီဘိုင် ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ကြတယ် ဆိုလားလို့ .. :grin: :grin:
ညီရေးသမျှထဲမှာ ဒီပိုစ်လေးက အမိုက်ဆုံး
ကျနော်တို့တတွေ ထစ်ကနဲ့ရှိတိုင်းယုံလွယ်တတ်တာကို ပြင်သင့်ပြီလို့ သွယ်ဝိုက်ပြောလိုက်သလိုပါဘဲ။
ကောင်းတယ် ဗရာကျော် နှစ်ထပ်ကွမ်း………………..
အဲ … လိမ်တာအခုမှသိလား … ကြာရောပေါ့ … အနှစ်နှစ်ဆယ်တောင် …. အခုထိ လိမ်တုန်း …. မိသွားရင်တော့ ငိုပြမှာပေါ့ …
အင်းဗျ. ရခိုင်ပြည်နယ်ကို တာဝန်ယူထားရတဲ့ IGE ကုမ္ပဏီ
လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေပီ။အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းပေးသင့်ပါပီ။
ဖင်မနိုင်ပဲ ဖင်သရမ်းချင်တဲ့ မဆရနဲ့အပေါင်းအပါ စားဖားများ။
အခုရက်ပိုင်း အဲဒီဖုန်းတွေချပေးပြီး မောင်ပေပြောသလို ဖုန်းတွေက အူကြောင်ကြောင်တွေဖြစ်။
လိုင်းတွေပျောက်။ ခွေးမသားတွေ လို့သာ ဆဲချင်တော့တယ်။ အဆဲချံပီယန် ဂျော်နီအောင်ပုရေ ဆဲပေးပါဦး။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာကို Subscriber တွေဆီ အကြောင်းကြားမှုလည်း မရှိ ။
ဘယ် အချိန်အထိလဲ ဆိုတာကိုလည်း အသိပေးမှုလဲ မရှိ ။
ဘယ်လို Responsibility မျိုးမှလဲ မရှိ ။
Customer Care Services တို့Customer Right ဆိုတာတို ့ကို အသာဘေးဖယ်ထား ။
နင့်မေကလွှား …..ရောင်းတော့ရောင်းပြီး သုံးမရတဲ့ ဟာကတော့ တဆိတ် မိုက်ရိုင်းလွန်းအား
ကြီးမနေဘူးလား ။ ၂ သိန်းကြီးများတောင် ပေးရတဲ့ …နိုင်ငံတော်ပိုင် ဆသရ နဲ့ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်
တွေ ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်တဲ့ ကွန်ယက်တောင် ဒီလို ဖြစ်နေရင်…ဟို…၅၀၀ဝ နဲ့ကဒ်ရောင်းမယ် ဆိုတဲ့
ယခု အချိန်မှ စပြီး တာဝါတိုင်မှ စက်ဖွင့်ပေးထားတာကြောင့် လိုင်းမိသွားပါပြီ ။
သေချာအောင် နောက်ထပ် စောင့်ကြည့်ပါဦးမယ် ။
ဒါဟာ.အူးဂဏန်းနဲ့သဂျီးရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့်ဆို မှားမယ်မထင်ဘူး..ဗျား..
တစ်လောကလည်း ရေခဲရောင်းတဲ့ လူဂျီး အဆင်ပြေသွားတယ် ..
ခုလည်း ဒီလူဂျီး အဆင်ပြေသွားပြန်ပြီ …
ဒါ ကျုပ်တို့ ရွာဂျီးအတွက် ဝမ်းသာစရာတွေပဲဗျို့ ….
နိဂိမိ ဝမ်းသာအောင် လေလည်ပြတာက ပိုပြီး နံတယ်
9:00 PM လုံးဝ တိတိမှာ တာဝါတိုင်က စက်ကို ပြန်ပိတ်လိုက်တယ်
ဆိုလာ အပြားတွေက တောက်လျှောက် အလုပ် မလုပ်ပဲ ပိတ်ထားခဲ့တယ်
ဆိုတော့….စဖွင့်ပေးတဲ့ အချိန်က ညနေ 6:00 PM
Battery ဆိုတာမျိုးက လုံးဝ အားကုန်တဲ့ အထိ ပေး မသုံးတာမျိုး ဖြစ်စေ
Battery မှာ ရှိတဲ့ လျှပ်စစ် အားကို ချိန်ညှိပြီး စက်ကို 9:00 PM လောက်ကို ပိတ်ဖို ့
ချိန်ညှိထားခဲ့တဲ့ အခြေအနေမျိုး ရှိလောက်မယ်
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မနက်ဖြန် မနက်မှာ တိုင် အပြည့်မြင်ရရင်
နည်းပညာကလည်း.. အင်မတန်ရှုပ်ထွေးတယ်လို့.. ထင်မိတယ်..
နောက်နှစ်တွေဆို.. ပြဿနာကြီးတက်တော့မယ်..။ တက်တော့မယ်..။ တက်တော့မယ်ဟေ့..တက်တော့မယ်..။
The U.S. still hasaslight spectrum surplus. But at the current growth rate, the surplus turns intoadeficit as early as next year, according to the Federal Communications Commission’s estimates.
မိုးလင်းက စပြီး လိုင်းအပြည့်ဖြစ်နေပါပြီ ။
ရွာထဲ မဝင်ဖြစ်တာလဲကြာလို့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့် လိုက်ကြည့်မိကာမှ ကိုရင်နိဂိမိ Post လေးကတော့ အရဲတွေနဲ့ ဝေ၊ ဟိုလိုလဲနီ၊ ဒီလိုလဲနီ၊ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော ရောင်ဗလတ်ကိုခဲနေတာပါရော့လား..
ဒါက မြန်မာပြည်က ကိုရင်နိဂိမိအဖြစ်အပျက်
ကျုပ်ကတော့ ကုလားမသံကြားရတိုင်း အသက်တစ်ရက်ပိုတိုရသလိုပဲ
ခေါ်လိုက်တဲ့ဖုန်းတိုင်း အဲဒီကုလားမပဲ ကိုင်ထားသလားထင်ရတယ်
သူပြောနေတာ နားမလည်ပေမယ့် မြန်မာပြည်က လူလိမ်မ လို မိန်းမစားပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့
(အတွေ့အကြုံလေး ကြုံတုန်း ဝင်လျှာရှည်ပြတာ)
@ ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ
နီချင်သလို နီပါစေဗျာ ။ အားလုံးရဲ့လိုအင် ပြည့်ဖို ့က အဓိကပါပဲ ။
ဒီမှာသာ နီနေတာ ည ၈ နာရီ အဲဒီ တာဝါတိုင် စခန်းရှေ ့က ဖြတ်လာတော့
အခန်းထဲက စက်ပုံးကြီးတွေကို စက်ဖွင့်ထားလိုက်တာမှ မြင်မြင်သမျှ ခလုတ်တွေရော
ဒိုင်ခွက်တွေပါ စိမ်းနေတာပဲ ။ ခုတော့ ကျွန်တော် နေ ့ရောညပါ တိုင်အပြည့်နဲ့G ကို
စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ သုံးနေရပါပြီ ။
အားအားယားယား ဂျီူတီချပြီး လိုက်နီပေးနေသလိုဘဲ ။
မင်းတို.ကဘဲနီနိုင်မလား ….ကျုပ်တို.ကဘဲ ကလော်တုတ်နိုင်မလား ….
သူများ ကို နီဖို့ အတွက်
ကလစ် လုပ်ရတာ ကို
ကိုယ့်လက်ကိုယ် ပြန်သနားစမ်းပါ ဟယ်။
အင်း – မဟုတ်ရင်တော့ သူဂျီး ပရိုဂရမ် ရေးပြီး ရန်းတာထားတာ ဖြစ်ရမယ်။
ကြည့်ရတာ.. ဒီလသတင်းစာက.. ကက်ဘိနက်ထဲရောက်သွားသမို့.. ဝက်ဘ်ဆိုက်လည်း.. နေပြည်တော်ကသိနေတာတွေဖြစ်ပြီး.. လိုက်လုပ်ပေးကြရတာ.. .. စိတ်တိုနေကြတယ်နဲ့တူတယ်..
ပြောရရင် စနေနေ့က ရန်ကုန်ကို တစ်နေ့လုံးဖုန်းခေါ်လို့ မရဘူး။
ကျွန်မ က skype ကနေ အိမ်ဖုန်းတွေကို ခေါ်တာ။
ဟုတ်လားမဟုတ်လား မသိတဲ့ သတင်း ” ဝိုင် နဲ့မှ မဟုတ်ရင် အရေးယူမယ် ” ဆိုတာကိုလဲ ကြားထားတော့ ကြည့်ရတာ skype အဝင်ကိုပါပိတ်ထားလား ထင်မိတယ်။
တနင်္ဂနွေ ဆက်ခေါ်တာလဲ တော်တော်နဲ့ မရဘူး။
ဒါနဲ့ စိတ်တိုပြီး “ဟင်း ဂေဇက်မှာ ဖွမှဘဲ” လို့ဘဲ ပြောရသေး။ ခေါ်လို့ ရတွားတယ်၊ အဟိ။
နာမည်လေးရွတ် လိုက်တာ နဲ့ တောင် ဒီလို စွမ်းတာ။ :-)
အနီတွေ ပေးတာတော့ မသိဘူး
အနီတွေ ဖြောက်တာတော့ သဂျီး ပလိုဂလမ် ရွမ်းထားတာသေချာရဲ့…
ဘယ့်နှယ့် မေ့သလောက်ရှိ တခါဝင်ကြည့် ….
စိတ်ထိခိယက်ပြီး သကာလ မခံဇားနိုင်လို့ ..ဘာဖစ်တယ်ညာဖစ်တယ် အော်ကြည့်
အဲ့ ..အနီလေးတွေ မတွေ့ရတော့…..
သဂျီး ဖျောက်ပေးနေတာ သေချာပါတယ်အေ…
SELECT အနီ FROM post WHERE author =”မောင်ဂီ့” SET အနီ= အစိမ်း;
ဒါမိုး ဒါမိုး ….